July 1, 2019 - ThutaStar
ဒီအန်အေ မတွေ့ဘူးဆိုပြီး ဘာလို့ ကြိုသိနေတာလဲ ဒါဂျာနယ်တစောင်ကို တရားဝင်ပြောထားတဲ့ စကားနော်ဆိုတဲ့ ချစ်သုဝေ….
July 1, 2019 Thuta Star 0
ချစ်သုဝေကတော့ အနပညာအလုပ်တွေကိုလဲ အဆက်မပြတ်လုပ်ကိုင်နေသလို ကြော်ငြာတွေကိုလဲ ရိုက်ကူးနေရတဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် အနပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်သုဝေကတော့ ဇနီးမောင်နှံကတော့ အနပညာအလုပ်တွေကိုလဲ လုပ်ကိုင်နေသလို ပရဟိတအလုပ်တွေကိုလဲ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော်စုံတွဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုမှာတော့ ကြားရတာနဲ့ကို စိတ်မကောင်းစရာကောင်းတဲ့ သက်ငယ်မုဒိမ်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပရိသတ်တွေ ရော အနပညာရှင်တွေကြားမှာပါအတော်လေးကို လူပြောများနေတာပဲ […]
မီတာခတိုးသဖြင့် လုပ်ခလစာတိုးပေးရန် အလုပ်သမားများတောင်းဆို ….
မြန်မာနိုင်ငံတ၀န်း ဇူလိုင် ၁ ရက်ကစတင်ပြီး လျှပ်စစ်မီတာခတွေ အစိုးရက တိုးမြှင့်ကောက်ခံမယ့် ကိစ္စဟာ အခြေခံ အလုပ်သမားတွေအတွက် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်စေတယ်လို့ အလုပ်သမားတွေက ပြောပါတယ်။မီတာခနှုန်းထားတိုးမြင့်လာတဲ့နည်းတူ လုပ်ခလစာတွေလည်း တိုးမြှင့်လာစေဖို့အတွက် နိုင်ငံတော်အစိုးရမှာ တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကို မီးမောင်းထိုးပြတဲ့ အနေနဲ့ ”လစာမတိုး မီတာခ တိုးသည်” ဆိုတဲ့ အလုပ်သမားလှုပ်ရှားမှု ကမ်ပိန်းတခုကို […]
ပိန်ပိန်သွယ်သွယ်မှ လှတယ်လို့ ထင်ကြတဲ့ အခုခေတ်မှာ ၀၀ဖြိုးဖြိုးကောင်မလေးတွေဟာ ဆွဲဆောင်မှုမရှိဘူး လို့ ထင်မြင်တတ်ကြပါတယ်။ တချို့ဆိုတယ် ဝတယ်လို့ အပြောခံရပြီး ပျင်းရိလေးလံသူတွေအဖြစ် ပြောဆိုတတ်ကြပေမဲ့ တကယ်တော့ သူတို့မှာ ပိန်တဲ့ကောင်မလေးတွေ ထက် ပိုကောင်းတဲ့အချက်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ၀၀ဖြိုးဖြိုးကောင်မလေးတွေကို လက်ထပ်တဲ့ အမျိုးသားတွေဟာ အိမ်ထောင်ရေးမှာ ပိုမိုပျော်ရွှင်မှုရှိကြတယ်လို့ […]
မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ လာမယ့် ၄၈ နာရီအတွင်း မုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြောင်း ထုတ်ပြန် ….
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အ‌ခြေအနေ။ ယနေ့မြန်မာစံတော်ချိန် (၀၆:၃၀) နာရီအချိန်တိုင်းထွာချက်များအရ ယမန်နေ့က ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အရှေ့မြောက်ပိုင်းတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသော လေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်း (Low Pressure Area) သည် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းတွင် ဆက်လက်တည်ရှိနေပါသည်။ အဆိုပါ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းသည် ပိုမိုအားကောင်းလာကာ နောက် ၄၈ နာရီအတွင်း မုန်တိုင်းငယ် (Depression) အဖြစ်သို့ရောက်ရှိနိုင်သည်ဟု ခန့်မှန်းရပါသည်။ […]
သက်ငယ်မုဒိန်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး လျော့ရဲနေတဲ့တရားဥပဒေကို မမမြပြောပြီ…
မီးသတ်ဌာနနားခဏတာယာဉ်ရပ်နားရာမှ မီးသတ်ဝန်ထမ်းများနဲ့ အခြေအတင်ပြဿနာဖြစ်မှုကို အွန်လိုင်းပေါ် Live လွှင့်ပြောဆိုခဲ့ရာမှ လူသိများတဲ့ဆယ်လီတစ်ဦးဖြစ်လာသူ ဒေါက်တာမြ၀တ်ရည်ကတော့ အမှန်တရားကိုချစ်မြတ်နိုးသူဖြစ်ပြီး မဟုတ်မခံစိတ်ရှိသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တရားရဖို့အတွက် အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ Live လွှင့်ရင်း ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းလေ့ရှိတာကြောင့် တော်တော်များများရဲ့ပြောဆိုဝေဖန်မှုတွေကို အတိုင်းအဆမရှိခံခဲ့ရသလို သူမဘက်ကနေရပ်တည်အားပေးသူတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပညာတတ်ဆန်တဲ့ သူမရဲ့ပြောဆိုမှုတွေနဲ့ သူမရဲ့စိတ်ဓာတ်အခြေခံကို သိမြင်နားလည်လာတာကြောင့် ယခုနောက်ပိုင်း ဒေါက်တာမြ၀တ်ရည်ဘက်ကနေ […]
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်က စော်ကားခံခဲ့ရကြောင်းပြောပြလာခဲ့တဲ့ နေခြည်ဦး….
မိန်းကလေး ပရိသတ်များရဲ့ အချစ်တော်၊တစ်ယောက်ဖြစ်သလို Beauty By Naychi ရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင်တစ်ဦးဖြစ်သလို သရုပ်ဆောင်တယောက်လည်း ဖြစ်လာတဲ့နေခြည်ဦးကတော့ သူ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တုန်းက လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစော်ကားခံခဲ့ရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ “နေခြည် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် နေခြည် ၁၂ နှစ်၊၁၃ နှစ်အရွယ်က Sexual Harassment လုပ်ခံခဲ့ရဖူးပါတယ်။ […]
ထီသိန်းတစ်သောင်းခွဲ ကံထူရှင် အသက် ၈၀ အမေအိုရဲ့ ဘဝအကြောင်းနှင့် ထီထိုးဖြစ်ပုံ….
အောင်ဘာလေထီ ငွေကျပ်သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုအား ဟင်္သာတမြို့မှ ငွေကြေးချို့တဲ့သူ အမေအိုက ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့တွင် ထွက်ရှိသည့် (၅)ကြိမ်မြောက် ကျပ် (၁၀၀၀)တန် အောင်ဘာလေသိန်းဆုဖွင့်ပွဲ၌ ထိုသို့ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ “အမေ့ယောက်ျားက စစ်သား၊ သူက ဆုံးသွားပြီ။ ပင်စင်ရတယ်။ ၈၇၅၀ […]
ကိုကို ၂ယောက်ကိုကိုလုပ်တာ အခန်းကယ်ြကို ခေါ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ သမီးလေးVictoria ရဲ့ နှုတ်ထွက်စကား..
သက်ငယ်မုဒိမ်းတွေအတွက်ပြန်Shareပေးပါ ကိုကိုလုပ်တာ။ကိုကို ၂ယောက် အခန်းကျယ်ကို ခေါ်သွားတယ်ဆရာမ နှင်းနု သိတယ်။ဆရာမနှင်းနု က ကိုကို ကိုဆူတယ်။ဆရာမနှင်းနု ရေဆေးပေးတယ် အထက်ပါအကြောင်းအရာကမိဘတွေ၊အမှန်တရားအတွက်တစိုက်မတ်မတ်သွားနေတဲ့ သူတွေရဲ့ ရင်ကို တဆစ်ဆစ်နာကျင်စေတဲ့ ယခုမှ ၃နှစ်နဲ့တစ်လပြည့်သွားတဲ့သမီးလေးVictoria(ဗစ်တိုရီးယား)ရဲ့ နှုတ်ထွက်စကားအကုန်ပါဘဲ ဒီထပ် ပိုပြီး ဘာမှ မပြောခဲ့ပါဘူး တရားခံက 17နှစ်နဲ့15နှစ်ပါ ဒါ […]
စပ်တူထိုးတဲ့ ထီကနေ ထီဆုပေါက်လို့ ပျော်နေတဲ့ သဇင်ထူးမြင့်
သရုပ်ဆောင်ဦးခင်လှိုင်ရဲ့ သမီးလေး သဇင်ထူးမြင့်ကတော့ ဇူလိုင်လကို ကံကောင်းခြင်းတွေနဲ့ စတင်လိုက်ပါပြီ။(၅) ကြိမ်ြေ မာက် အောင်ဘာလေ တစ်ထောင်တန်သိန်းဆုဖွင့်ပွဲရဲ့ ကံထူးရှင်တွေကတော့ ဒီကနေ့ မှာပဲ ထွက်ပေါ် လာခဲ့ ပါပြီ။သင်ဇင် ထူးမြင့်ကလည်း ကံထူးရှင်တွေထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ထီဆုလေး ပေါက်တာ ဆိုပေမယ့်လည်း သူမ ကတော့ အရမ်းကို ပျော်နေပါတယ်။မင်းခန့်ကို […]
Wisdom Hill မူကြိုကျောင်းမှာ အဓမ္မပြုကျင့်ခံရတဲ့ သမီးလေး ဗစ်တိုးရီယား အတွက် အဆိုတော်လင်းလင်း ပွဲကြမ်းပြီ …
Wisdom Hill မူကြိုကျောင်းမှာ အဓမ္မပြုကျင့်ခံရတဲ့ သမီးလေး ဗစ်တိုးရီယား အတွက် လင်းလင်းက ခုလို Post တင်ထားပါတယ်“ဗစ်တိုးရီယားလေးအတွက် ဗစ်တိုရီးယားများစွာက ဝိုင်းဝန်းကြတာပါ။ ဝိုင်းတွန်းကြတဲ့ဒီအရွှေ့ ရွေ့ကို ရွေ့ရမယ်။ ၃၇၆ နဲ့အတူ ၁၀၉ နဲ့ ၁၁၄ ပုဒ်မတွေထဲမှာ မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ပါဝင်နေပါစေ ,,,, နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် […]